Posted by editor on Julaay 26, 2011 Comments
Maxkamadeenta wasiirkii hore ee arrimaha gudaha dalka Masar oo dib u dhac ku yimid
Cairo:- Maxkamad ku taala magaalada Qaahira ayaa dib u dhigtay in markale cadaalada la hor keeno wasiirkii hore ee arrimaha gudaha Masar niinka lagu magacaabo Xabiib Al-caadili iyo lix kamid ahaa gacan yarashiisa oo lagu eedeenayo dilka dibadbaxayaasha intii lugu guda jirey dhacdooyinkii kacaankii 25 Janaayo dalka Masar.
Mas’uuliyiinta la filayey in maxkamdda la horkeeni doono ayaa waxaa kamid ahaa ninka lagu magacaabo Axmed Ramsi oo ahaa madaxii hore ee ciidanka amaanka, Cadli Faayid oo ahaa kaaliyaha koowaad ee wasiirkii daakhiliga iyo mas’uuliyiin kale.
Maxkamadda ayaa u qabatay in maxkamad la horkeeno Al-caadili 3-Augoust 2011, oo ah maalintii loo qabtay in madaxweynihii hore ee dalka Masar Xusni Mubaarak iyo labadiisa wiil la maxkamadeen doono.
Shacabka Masar ayaa maalintii shaley aad uga warsugayey Fadhiga maxkamadda wasiirkii hore arrimaha gudaha iyadoo la filayey in si toos ah looga baahin doono Televison-ka qaranka dalka Masar.
Ibraahiim Basyuuni oo kamid ah qareenada u doodaya shacabka doonaya in la maxkamadeeyo Alcaadili ayaa bishii April ee la soo dhaafay qaadiga ka codsaday in TV-yada loo ogolaado in ay baahiyaan wasiirkii hore oo ku dhex jira goobta dambiilayaasha ee maxkamadda misana xiran dharka caanka ku ah maxaabiista .
Dibadbaxayaasha kacdoonka dalka masar ayaa dalbanaya in la xukumo xabiib Alcadili islamarkaana hantida uu lunsaday dib loogu soo celiyo shacabka.
Xabiib Alcaadili waxaa lagu heystaa amar uu bixiyay xiligii ay bilaabanayeen kacdoonkii 25 kii January ee xilka looga tuuray mubarak isagoo ciidamada dalkaas ku amray in ay rasaas ku furaan dadka dibadbaxa sameynayay.
Ciidamada ilaalada xeebaha Spain oo gacanta ku dhigay 35 tahriibayaal ah
Madrid:-Ciidanka ilaalada xeebaha dalka Spain ayaa shaaca ka qaaday in ay ka hortageen dooni ka sameeysan Balaastik oo ay saarnaayeen 35 muhaajiriin si sharci dara ah u gaaray xeebaha koonfureed ee dalka Spain ayna ku jiraan carruur.
Bayaan ay soo saareen Ciidanka ilaalada xeebaha Spain ayaa lagu sheegay in doonidaan laga soo qabtay meel 40mayl u jirta xeebaha magaalada Almeeriya koonfura bari dalka Spain, islamarkaana muhaajiriintu ay mareen baaritaan adag ayna xaaladoodu ay aad u wanaagsan tahay.
Toddobaadkii la soo dhaafay Ciidanka ilaalada xeebaha Spain ayaa ka hortagay doonyo ay saarnaayeen 150 qof oo tahriib sharci dara ah oo ka yimid xeebaha woqooyi Africa si ay uga shaqeysteen una degaan dalka Spain.
Tirada tahriibta sharci darada ah ee soo gaartay xeebaha dalka Spain sanaddii la soo dhaafay 2010 ayaa gaartay saddex kun lix boqol soddon iyo labo muhaajiriin taasi oo kadhigan in %50 hoos u dhacday marka la bar bardhigo sanadkii 2009 oo ay ahaayeen inkbadan toddobo kun oo muhaajiriina
Britain oo markale ugu baaqday Qadaafi in uu xilka isaga dego
London:-Wasiirka arrimahaha dibadda Britain ninka lagu magcaabo William Hague oo kulan kula yeeshay magaalada London dhigiisa dalka faransiiska ninka lagu magcaabo Alan Joobee ayaa sheegay in madaxweyne Qadaafi uu joogi karo dalkiisa haddii uu xilka baneeyo.
Wasiirka ayaa carababay in ka tagitaanka Qadaafi dalka Libya ay tahay xalka ugu haboon ee lagu soo afjari karo dhibaatada Libya, balse dalalka Britain iyo France aysan dani ugu jirin hagida mustaqbalka Libya.
Wasiirka ayaa tilmaamay in ka tagitaanka Qadaafi dalka Libya ay keeni doonto in shacabka Libya aysan ku noolaan cabsi uga timaada dhanka Qadaafi.
Wasiirka ayaa ku nuuxnuuxsaday in Britain iyo France ay ku mideysan yihiin aragtida ay ka qabaan xalinta mushkiladda ka taagan Libya.
Dhanka kale wasiirka arrimaha dibadda France ayaa taageeray hadalada Mr Heeg, wuxuuna sheegay in xulufada reer galbeedka ay iskaashi buuxda ka leeyihiin dhacdooyinka dalka libya.
Wasirka ayaa daafacay faragelinta milatari reer galbeedka dalka libya, wuxuuna carabaabay in haddii aysan faragelin lahayn afar bilood ka hor uu xasuuq kadhici lahaa deegaanka Benghazi ee xarunta u ah mucaaradka dalka Libya.
Banaanbax looga cabanayo shaqo la’aan oo kadhacay dalka Spain
Madrid:-Waxaa maalintii shaley isugu soo baxay wadooyinka waa weyn ee magaalo madaxda dalka Spain ee Madrid dad ka careysan kororka sicirka maciishada iyo shaqo la’aanta kajirta dalkaas.
Dadka cabshada sameenayey ayaa waxa ay qaarkood ka yimaadeen meelo fog fog iyagoo lugeenaya kuwaasi oo soo jaray safar qaatay toddobaadyo.
Qaar kamid ah dibadbaxayaasha ayaa bilaabay dibadbaxooda 34 maalmood ka hor iyagoo soo maray inkbadan 650km laga soo bilaabo magaalada Kaadiis oo ku taala koonfur galbeed dalka spain.
Dadka dibadbaxa dhigaya ayaa sheegay in ay ka careysan yihiin fashilka siyaasiyiinta xalinta dhibaatada shaqo la’aanta ku sii baahaysa Spain, waxayna ku eedeenayaan musuqmaasuq.
Dowladda Spain oo toddobaadkii hore soo saaraty Bayaan rasmi ah ayaa sheegtay in hoos u dhaca shaqo la’aanta kajirta dalkaas ay gaartay 4.12 malyan oo qof bishii june ee la soo dhaafay .
Bayaankan oo ay soo saartay wasaaradda shaqada iyo socdaalka Spain ayaa lagu sheegay in 68 kun oo qof laga diiwaan geliyey goobaha shaqooyinka guud bishii June ee la soo dhaafay.
Wasiiru dowlaha arrimaha shaqada oo saxaafadda la hadashay ayaa sheegtay in hoos u dhaca shaqa la’aanta dalka Spain ay gaartay 212 kun oo qof inta u dhexeysay bilihii Maarso iyo June ee la soo dhaafay.
Wasiirka ayaa sheegay in talabadani ay ku dhiirigelinayso xukuumadda in ay sii wado dib u habaynteeda iyo qaadista talaabooyin si loo abuuro fursado shaqo oo badan gaar ahaan dhalinyarda.
Barlamanka Malta oo ansixiyey xeerkii ugu horeeyey ee ku aadan arrimaha furniinka
Barlamanka Malta ayaa ansixiyey markii ugu horeysay xeer taariikhi ah oo ku aadan meel marinta qaraarka furniinka, kaasi oo markii hore ku xirnaa in madaxweynuhu uu saxiixo labada qof ee kala tagaya.
Qaanuunka cusub ayaa dhaqan geli doono bisha October, haddii uu madaxweyne Jorge Abeyla ansixiyo sida la filayo.
Muwaadiniinta Malta ayaa hadda awood u yeelan doono in ay dalka dibadiisa isku furaan haddii ay doonayaan.
Barlamaanka Malta ayaa cod aqlabiyad ah ku ansaxiyey qaraarka iyadoo 52 cod ay ogolaatay halka 11 cod ay ka soo horjeesatay, iyadoo 5 codna ay ka aamustay, waxaan fadhiga codeenta kamqnaa hal xubin oo barlamanka katirsan.
Wakaaladda wararka ee AP ayaa sheegtay in natiijada codeynta barlamanka ay tahay guul balaaran sababtoo ah xeerarka badankood ee Malta waxaa lagu ansixiyey aqlabiyad ah hal cod.
Ra’iisal wasaare Loran Gonzee ayaa kamid ah dadka tirada yar ee diidan in xeerkan la meel mariyo, wuxuuna sheegay in ansixinta xeerkan uu hoos u dhigayo qoyska.
Ka hor inta uusan u codeyn barlamanka ,dowladda Malta ayaa ahayd dalka keliya ee xubin ka ah midowga Yurub ee aan labada qof ee is-qaba aysan sharci u lahayn in ay is-furaan ama kala tagaan.
Muwaadiniinta Malta oo tiradoodu gaarayso afar boqol iyo toban kun oo qof ayaa la’aaminsan yahay in %95 ay yihiin catholic ( Kaatolik)